Fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra : be mpandeha indrindra ny mankany Mahajanga (NewsMada) | AEMW
Fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra : be mpandeha indrindra ny mankany Mahajanga (NewsMada)
Ao anatin’ny vanim-potoana fialantsasatry ny mpianatra izao. Any Mahajanga, 600 km avy eto an-dRenivohitra no be mpandeha indrindra, amina faritra maro manerana ny Nosy. Noho izay fahamaroan’ny mpandeha, hita eny ny fanararaotan’ ireo kaoperativa mpitatitra sasany.
Nanomboka ny volana jolay, mitohy amin’izao volana aogositra izao, mitombo hatrany ny mpandeha mankany Mahajanga, Kaoperativa tsy latsaky ny 10, samy mahafeno ny fiarany izay mandeha avokoa. Maraina amin’ny 7 ora, tolakandro amin’ny 4 ora, hariva, amin’ny 6 ora na 7 ora samy fotoana fiaingana avy eo Ambodivona. Fiara (sprinter no betsaka) 40 – 50 isan’andro eo ho eo ny midina mankany Mahajanga isan’andro amin’izao vanim-potoana izao. 30.000 Ar ny saran-dalana. Talohan’ny volana jona, mbola 25.000 Ar.
Misy mampiakatra 35.000 Ar tampoka
Misy ny fotoana sasany tsy maharaka mihitsy ny fiara miainga avy eo Ambodivona, koa tsy mahataitra ny sasany, ny mampiakatra an-tsokosoko saran-dalana 35.000 Ar tampoka eo , ary ao ireo sahy mametraka mpandeha dimy isaky ny fitoerana raha tokony ho efatra. Mandeha “milamina” ireny fiara ireny, tsy misy tokony atahorana ny mpitandro filaminana noho ny antony efa diso fantatry ny rehetra. Ny mpandeha mijaly ; mbola sahy mandeha mafy ny mpamily sasany ; raha tokony ho mpamily roa, mpamily iray ihany ; entana misavovona.
Ireo rehetra ireo tsy misy fitsinjovana ny ain’ny mpandeha. Manararaotra samy mitady ny tombony be indrindra avokoa ireo rehetra miasa ho amin’izany. Amin’ireny fiara mitondra mpandeha mihoatra ireny anefa, tsy afaka miantoka intsony ny trano fiantohana raha sanatria loza mitranga. Raha ny fantatra, tsy ahitana tompon’andraikitra avy amin’ny minisiteran’ny Fitaterana na ny ATT tonga manara-maso eny an-toerana. Tsy eo Ambodivona ihany fa eny amin’ny “Fasan’ny karana” ihany koa, zotra mianatsimo.
← Mbola tsy tafarina ny harinkarena 2016 : mitaky fanovàna politika ara-toekarena aty Afrika ny FMI (NewsMada)
Fijerena « éclipse » ao Mahajanga : vonona ny ao Katsepy handray ny hetsika (NewsMada) →